वर्गीकृत | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: Без рубрики
म कसरी मेरो फोन नम्बर प्रयोग गरेर मेल प्राप्त गर्न सक्छु?
प्रकाशित 22.08.2017 28.08.2017
कसरी फोन नम्बर प्रयोग गरेर मेल पुन: प्राप्ति गर्ने? यस समस्याको सामना गर्नेले मलाई लेख्नुहोस्! उत्तर खुवाउँदैन। यस लेनाको लागि बाँया लिंकहरू। खेलहरूमा फालिन्छ। Enrages यदि तपाईं आफ्नो पासवर्ड रिकभर गर्न चाहानुहुन्छ, ...
म कसरी Mail.ru समर्थनलाई सम्पर्क गर्न सक्छु?
कसरी मेल.ru समर्थन सेवालाई सम्पर्क गर्ने? नमस्कार! कृपया मलाई मेरो पासवर्ड रिकभर गर्न मद्दत गर्नुहोस्, ह्याकरहरूले मेरो सबै डाटा परिवर्तन गरे। मैले समर्थन सेवा मार्फत यसलाई पुनर्स्थापना गर्न प्रयास गरें, तर उनीहरू भन्छन कि तपाईंसँग थोरै जानकारी छ। म सक्छु…
विवाहमा साक्षी नियुक्त गर्ने अवतारमा कसरी?
विवाहमा अवतारमा साक्षी कसरी नियुक्त गर्ने ?! सुनको लागि ह्रेरी, comments वटा टिप्पणीमा लेख्नुहोस्, माशा वा सचेतमा जानुहोस्, f4 थिच्नुहोस् र तपाईंलाई कति सुनको लागि hur ह्रेरे चाहिन्छ भनेर छान्नुहोस्, लेख्नुहोस् ...
लेनदेन नम्बर के हो? र मैले यसलाई कहाँ भेट्टाउन सक्छु?
लेनदेन नम्बर के हो? र म यो कहाँ पाउन सक्छु? नमस्कार, भुक्तानी कसरी फेला पार्ने, मलाई रसिद नम्बर थाहा छ। हेलो। Yandex- पैसाको साथ कार्डमा स्थान्तरण गरियो। पैसा बाँकी छ तर कार्डमा आइपुगेन। ...
जावास्क्रिप्ट इन्टरनेट एक्सप्लोरर 8 मा कसरि सक्षम गर्ने?
इन्टरनेट एक्सप्लोरर Java मा म कसरी जाभा स्क्रिप्ट सक्षम गर्ने? १. जाभास्क्रिप्ट सक्षम गर्नको लागि, उपकरणहरू छनौट गर्नुहोस्, त्यसपछि इन्टरनेट विकल्पहरू इन्टरनेट एक्सप्लोरर मेनूबाट। २। प्यानलमा देखा पर्नेछ, "सुरक्षा" ट्याब चयन गर्नुहोस्, क्षेत्र चयन गर्नुहोस् ...
हामीलाई "Wit from Wit" का २ 26 पात्रहरूको सूची चाहिन्छ।
हामीलाई ए २ ग्रिबोएदोभले लेखेका "Woo from Wit" मा सबै २ characters पात्रहरूको सूची चाहिन्छ। धिक्कार विट ए कमेडीले चार अभिनय पदमा अभिनय गर्दै: पाभल अफानास्याविच फेमसुभ, सोफिया, राज्य स्थानको प्रबन्धक ...
म कसरी आफ्नो ईमेल ठेगाना परिवर्तन गर्न सक्छु?
म कसरी आफ्नो ईमेल ठेगाना परिवर्तन गर्न सक्छु? तपाईं केवल प्रोफाइल परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, तर ईमेल आफैं, दुर्भाग्यवस, परिवर्तन गर्न सकिदैन। नयाँ सिर्जना गर्नुहोस्, तर चिन्ता नलिनुहोस्) को ठेगाना छैन? यदि मेल, अर्को मेलबक्स शुरू गर्नुहोस् 🙂 ...
हटाइएका इमेलहरू कसरी ठीक गर्ने?
मेटाईएको ईमेल कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने ??? # १ मेलमा मेटाईएको सन्देशहरू पुनर्स्थापित गर्नु भन्दा पहिले तपाईले यो याद गर्नु आवश्यक छ कि कसरी जानकारी हटाईएको थियो र कहाँ थियो। त्यसो भए, यदि डाटा त्यस्ता फोल्डरहरूमा थियो भने ...
फन्ट बोल्ड कसरी बनाउने? प्रयोग गरिएको html-ट्यागहरू। म तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न बुझ्दैन।
प्रकाशित 21.08.2017 28.08.2017
म कसरी फन्ट बोल्ड गर्न सक्छु? एचटीएमएल टैग प्रयोग गरीन्छ। म तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने बुझ्दिन। hmm aaaaa Italic Tag हरु तपाईले दुबै तिर पाठलाई कभर गर्नुभयो, यसैले यसलाई अलग पार्नुहोस्। ट्याग र पाठ बीच ...
के मैले सन्देश पठाउन सक्दिन?
के यो चिन्ता पठाउन सम्भव छ? चरण एक: अपरिचित ठाउँमा जानुहोस्, उदाहरण को लागी एक इन्टर्नेट क्याफे चरण दुई: एक पत्र पठाउनुहोस् विधि एक: अज्ञात ईमेल पठाउन तपाई कहीं नयाँ मेलबक्स दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ, नाम ...
टाढा उत्तर उत्तरमा कामको लागि चिकित्सा प्रमाणपत्रको नमूना कस्तो देखिन्छ?
के उत्तर नमूनामा कामका लागि नमूना मेडिकल सर्टिफिकेट कस्तो देखिनुपर्दछ पक्कै पुरानो हो। उत्तर -302०२-एन इरिनाका लागि नयाँ फारम यो जानकारी कहाँबाट आउँदछ? मलाई बताउनुहोस् pliz धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो एक चिकित्सा प्रमाणपत्र हो ...
प्रयोगकर्ता खाता के हो?
प्रकाशित 20.08.2017 28.08.2017
प्रयोगकर्ता खाता के हो? एक खाता रेकर्ड जानकारी समावेश छ जुन एक प्रयोगकर्ताले निश्चित कम्प्युटर प्रणालीमा आफैं बारे रिपोर्ट गर्छ। दैनिक जीवनमा समानार्थी शब्दको रूपमा, स्लng्ग सर्त खाता र खाता प्रयोग गर्न सकिन्छ, बाट ...
मैले मेरो प्रयोगकर्तानाम र पासवर्ड बिर्सें। म पृष्ठमा कसरी प्रवेश गर्छु?
म सम्पर्कमा मेरो प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्ड बिर्सनुभयो। पृष्ठ कसरी प्रविष्ट गर्ने? इ-मेल द्वारा केही पनि होइन। सुरू गर्नका लागि, सम्पर्कको साइटको मुख्य पृष्ठमा जानुहोस् जहाँ लगइन र पासवर्ड प्रविष्ट गर्ने क्षेत्रहरू अन्तर्गत ...
mail.ru मा एक मेलबक्स कसरी बहाल गर्ने?
कसरी मेलमा मेलबक्स पुन: भण्डारण गर्ने। उपयोगकर्ता स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो उपकरणबाट आफ्नो मेलबक्स पुनर्स्थापित गर्न पर्छ। म केवल स give्केत दिन सक्छु। यहाँ सल्लाह पढ्नुहोस् यदि यो आफ्नै लागि पहुँच पुनर्स्थापित गर्न असम्भव छ: http: //otvet.mail.ru/question/172719793 मेलमा पहुँच ...
टाउकोङ के हो?
ट्रोलिling के हो? यो "उत्तरहरू" मा सन्देशहरूको% ०% छ ट्रोलि the इन्टरनेटमा अशिष्टता हो। इन्टरनेट शब्दावलीमा, ट्रोल एक व्यक्ति हो जसले इन्टरनेटमा असभ्य वा उत्तेजक सन्देशहरू पोस्ट गर्दछ, उदाहरणका लागि, छलफलमा ...
डिग्रेड के हो? यो समयसँगै कुनै वस्तुको विशेषता बिगार्ने प्रक्रिया हो, पछाडि आन्दोलन, बिस्तारै बिग्रने, गिरावट, गुणस्तरमा कमी, प्रकृति र समयको कानून अनुसार बाह्य प्रभावको कारण पदार्थको विनाश। गिरावट, ...
यदि तपाईं 100 दिन जानुहुन्छ अवतारियामा कस्तो प्रकारको पुरस्कार दिइएको छ
१० अवतारमा पुरस्कार के दिइन्छ यदि तपाईं १०० दिन लग इन गर्नुहोस्, व्यक्तिहरू म चकित भए .. त्यहाँ सुनका लागि निःशुल्क कार्यक्रम थियो! यो धेरै सरल छ! र कुनै गाह्रो छैन! सामान्यतया, पुरस्कार पनि राम्रो छन् ...
सबै दिन लामो समयसम्म यो स्केप्युला जस्तो हुन्छ।
कम scapula संग दिन भर pricks यो के हुन सक्छ। बायाँ काँधको ब्लेड मुनि दर्द हुने रोगहरू: - ग्यास्ट्रिक अल्सरको अग्रणी लक्षण भनेको दु: ख हो, आवृत्ति, मौसमी, बढ्दो चरित्र, ...
कसरी डेस्कटपमा mail.ru होमपेज बनाउन
कसरी मेल.ru तपाइँको डेस्कटप मा एक गृह पृष्ठ मा नमस्ते! मेल बनाउनुहोस्। तपाईको गृहपृष्ठ पृष्ठलाई सँधै तपाईको चिठीहरू चाँडै पढ्न र तिनीहरूलाई उत्तर दिनको लागि सक्षम हुनको लागि हामी तपाईंलाई सिफारिस गर्दछौं ...
mail.ru मा एक प्रश्न सोध्न
प्रकाशित 15.08.2017 28.08.2017
कसरी मेल मा प्रश्न सोध्ने। यहाँ - तपाईंले पहिले नै आफ्नो पहिलो प्रश्न सोध्नुभएको छ)) तपाईंले "सोध्नुहोस्" बटनमा क्लिक गर्नु आवश्यक छ, जुन प्रोजेक्टको निलो हेडरमा छ)) त्यसपछि तुरुन्त शीर्षक शीर्षकमा लेख्नुहोस् ...
54 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,884 प्रश्नहरू।